MSF OO KA XUN QARAXII HOTEL SHAMO EE LALA BEEGSADAY ARDAYDA QALIN JABINAYSAY - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF OO KA XUN QARAXII HOTEL SHAMO EE LALA BEEGSADAY ARDAYDA QALIN JABINAYSAY
04.12.2009 | Gobolka Banaadir, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya, War-Saxaafadeed
MSF waxa ay aad uga xumaatey weerarkii dhowaan lagu qaadey intii ay socotey xafladdii qalin-jebinta ardayda caafimaadka ee Jaamacadda Banaadir. Guud ahaanba Soomaaliya waxaa ka jirta baahi caafimaad oo ballaaran, meelo badan oo ka mid ahna waxaaba uga sii darey rabshadda ballaaran iyo abaarta dabadheer. Haddana, bixinta adeegga caafimaadka ayaa si aad ah u yar, waxaana jirta in dad badan oo ku nool dalka qaybihiisa kala duwan ay qabaan silic aan loo baahneyn oo uu keeney maqnaanshaha daryeel caafimaad.
Ardayda caafimaadka ee ka qalinjebisa Jaamacadda Banaadir waxa rajo ay yar tahay in la helo ay siinayaan dadka Soomaaliyeed, taas oo ah suurtagalnimada in ay bixiyaan daryeel caafimaad oo nafo badbaadiya. Shaqaalaha caafimaadku waxa ay bixiyaan gargaar ku saleysan baahida caafimaad oo qura, iyada oo aan loo eegeynin siyaasadda iyo qabiilka qofku. Waxaa shaqadooduna muhiim u tahay yareynta silica haysta dadka ugu nugul dalka, tusaale ahaan carruurta nafaqo-xumadu hayso, haweenka uurka leh, iyo ragga qaba dhaawacyada. Si arrintan loo sameeyo, waa in la hubiyaa bedqabka shaqaalaha iyo tas-hiilaadka caafimaadka.
Sanadka 2009ka, MSF waxa ay ku faani kartaa in ay tababartey ayna shaqaaleysey tiro ka mid ah ardaydii ugu horreysey ee ka qalin-jebisey Jaamcadda Banaadir. Waxa ay ku biireen shaqaalaha kale ee MSF ee Soomaalida ah ee dadaalka badan, kuwaas oo shaqadoodu ay ururka awood u siisey in uu 10 mashruuc ka sii wado 8 gobol oo Soomaaliya ka mid ah, shaqaalaha oo taageero ka helay koox dibadda ka maareysa oo saldhiggoodu yahay Nayroobi.
MSF waxa ay tacsi u direysaa qoysaskii iyo saaxiibbadii dadkii dhibaatadu ka soo gaartey dhacdadaan laga xumaado.
MSF waxa ay Soomaaliya ka soo shaqeyneysey 17 sanadood waxaana ay hadda daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ka bixisaa siddeed gobol oo dalka ka tirsan; iyada oo ay mahaddeeda leeyihiin shaqaalaha Soomaalida ah ee dadaalka badan, oo koox maareynta u qaabilsan oo saldhiggoodu yahay Nayroobi ay dibadda ka soo taageeraan. Sanadkii 2008da oo keliya, kooxaha MSF waxa ay bixiyeen 727,428 la-talinta bukaan-socodka ah, oo ay ka mid yihiin 267,168 carruur ay da’doodu shan sano ka yar tahay ah. In ka badan 55,000 oo haween ah ayaa heley la-talinta daryeelka ka horreeya dhalmada waxaana in ka badan 24,000 oo qof oo bukaan-jiif ah la dhigey cusbitaallada iyo xarumaha caafimaadka ee ay taageerto MSF. Waxaa la sameeyey 3,878 qalliin, oo 1,249 oo ka mid ahi ay ahaayeen dhaawacyo ka dhashey rabshad. Kooxaha caafimaadku ayaa waxa ay daweeyeen 1,036 qof oo la silcayey cudurka loo dhinto ee la dayacay ee loo yaqaano kala-azar, in ka badan 4,000 oo laga daweeyey duumo (malaariya) iyo 1,556 oo qof oo loo bilaabey daawada qaaxada. Ku dhowaad 35,000 oo qof oo la silcayey nafaqo-xumo ayaa la siiyey cunto iyo daryeel caafimaad waxaana la bixiyey 82,174 oo tallaal.
Tags: arday, Banadir, South Central Somalia, daryeel caafimaad, hotel shamo, qarax